पाहुनाको पालो – Page4– MySansar
– डा. सन्देश दाहाल – माफ गर्नुहोला, धर्तीका सबै जीव जनावर जस्तै मेरो हृदयमा भेडाको लागि पनि ठुलो सम्मान छ। यहाँ भेडा केवल प्रतीकको रुपमा प्रयोग गरिएको हो। बच्चा बेलामा सुनेको अत्यन्तै घतलाग्दो कथा छ, जुन मलाई आजसम्म घरी घरी बिभिन्न प्रसंगमा बारम्बार याद आइरहन्छ। एउटा ब्राह्मणको घरमा एउटा बिरालो रहेछ, जसले नछोपेको खानेकुरामा जुठो… Continue reading
कर्पोरेट रवि : हङकङमा ७ सय डलर नतिरी देख्नै पाएनन् कसैले
Posted on October 3, 2018 October 3, 2018 by mysansar
नेताहरुले आफ्ना गुनासाहरु नसुनिदिँदा विरक्तिएका सर्वसाधारण एउटा सुटबुटमा ठाँट्टिएर टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुने ठिटोलाई असाध्यै विश्वास गर्छन्। विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा त्यहीँको नागरिक भएर लोभलाग्दो जीवन बिताउन सक्ने अवसरलाई चटक्क छोडेर सर्वसाधारणका ती गुनासाहरुलाई सशक्त ढंगले सम्बन्धित ठाउँहरुमा पुर्‍याउँदै जाली, फटाहा र भ्रष्टाचारीहरुको दोहोलो काढ्दै आइरहेका छन् जनताका छोरा रवि लामिछाने। उनै रवि हङकङसम्म आइपुग्दा जनताको… Continue reading
-रामप्रसाद देवकोटा- अन्ततः विदेश जाने निर्क्यौल गरियो। काठमाडौँ लागियो। कन्सल्टेन्सी खोजेँ। कालिमाटीमा ह्याण्डस फोर हेल्प सञ्चालक ८/१० वर्ष जापान बसेर आएकाले विश्वासिलो लाग्यो। जापान जान १४ लाख लाग्ने र युरोपको पोल्याण्ड जान ९ लाख लाग्ने र कमाई उक्तिकै हुने अनि भविष्य युरोप मा राम्रो हुने भन्ने निष्कर्ष निक्ल्यो। अब प्रक्रिया गर्न तिर लागियो। सुरुमा ४०… Continue reading
-सुवर्ण लता तुलाधर- अस्पताल भनेको बिरामी निको पार्न जाने ठाउँ हो। त्यहाँको क्याबिनमा हिलो पानी निस्केपछि सकिएन? हिलो पानीको भिडियो खिचेको हेर्नु होला। मोबाइल लिन जाँन्दा सम्ममा पानी अलि सफा भइसकेको थियो। क्याबिनभित्र बाथरुममा जाली नै छैन। ठूलो ढलमा पूरा प्वाल। यसको पनि भिडियो खिचेका छौँ। हेर्नुहोला। पैसा भने दुई हातले सोहर्ने, अनि फोहोर कोठा… Continue reading
-कृष्ण ज्ञवाली- देश गरिब रे, नेता उत्पात धनी । बोका, भैँसी, कुखुरा, सबैमा कर रे ! प्रतिपक्षमा बसेको काँग्रेसको सिर्जनात्मक विरोध छैन । गगन थापा धन्य एउटा रहेछन् र उनीहरूको साख जोगिएको छ । यी भन्दा माथिका काँग्रेसका नेताहरूलाई सिधै ’राम राम’ खुलेआम भन्दिए ! देउवाले ज्ञानेन्द्रले लगाइदिएको असक्षमको टिका पखाल्न सकेनन् ! सर्वहारा वर्गको… Continue reading
दाहाल यज्ञनिधिको शुक्रबार निधन भएको छ। उनीबारे डा. लेखनाथ काफ्लेले लेखेको यो ब्लग June 19th, 2013 मा माइसंसारमा प्रकाशित भएको हो। श्रद्धाञ्जलि! ‘जदौ’ भन्दै बिहान बिहानै ‘साहित्य संसार’ रेडियो साहित्यिक कार्यक्रम मार्फत आउने ‘यज्ञनिधि दाहाल’ ले आफ्नो मौलिक स्वर र रचनाहरू वाचन गर्ने जादुमय कला मार्फत सरल भाषामा नेपाली साहित्यलाई जनता समक्ष पुर्‍याए । साहित्य… Continue reading
‘कान्तिपुर कायाकल्पको अर्थ’ लेखेपछि एक चरण लाग्योः अलि बढी नै लेखिएछ कि? नेपाली मिडियाबारे त्यति धेरै संशय गर्ने बेला अझै भएको रहेनछ कि? तर घटनाक्रमहरुले फरक कुरा देखाए । उक्त टिप्पणीमा मैले जे लेखेको थिएँ, अवस्था सम्भवतः त्यसभन्दा पनि नाजुक भइसकेको छ । र त्यसका प्रमाणहरु बाहिर आइरहेका छन् । साउन १२ गते कान्तिपुरको कोसेलीमा… Continue reading
यस्तो पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?
Posted on July 19, 2018 July 19, 2018 by mysansar
– रविन्द्र – अस्ति माइतिघरदेखि सिंहदरबार को ट्राफिक जाममा मैले देखेको नम्बर प्लेट हो यो। हाम्रो बुझाइमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर अलिक उठेको हुन्छ। तर यो तस्बिरमा हेर्नुस् त – झण्डा को रंग – ० (सुन्ना)। सुन्ना अलिक जोडिएको हुँदैन। – दुईवटा AA बीचमा स्पेस।
मेरो कोठाको टिभीले काम गर्न छोडेको पनि धेरै नै भइसक्यो। हेर्ने त्यति फुर्सद पनि हुन्न। बेलुका एकछिन मात्र हेर्ने भएकाले धेरै भयो थन्किएको। फुटबलको महासंग्राम भनेर चिनिने वर्ल्ड कप नजिकिँदै छ। मलाई पनि नयाँ ठूलो टिभी किन्ने जोश चढेको छ। पशुपति यात्रा, सिद्राको व्यापार भने जस्तै, वर्ल्ड कप हेर्ने बहानामा धेरै दिनदेखि थन्किएको टिभी हटाएर… Continue reading